Long March and Hunger Strike for Free Burma and Daw Aung San Suu Kyi: 2009
To protest the continuing suppression of democracy in Burma, Buddhist monk Maung Maung Tate and some companions recently completeda900 mile march to the United Nations in New York City andanine day hunger strike. The monks also gathered in protest outside United Nations buildings in New York, to pressure the U.N. Security Council to take action in Burma.
Causecast’s Jonathan Harris recently had an opportunity to speak with Maung Maung Tate about his dedicated activism and the pursuit of freedom for Burma and imprisoned democratic leader Aung San Suu Kyi. Tate’s answers were translated into English by Moe Chan.
JH: So, where to begin. What day did the hunger strike end?
MMT: It just ended last Sunday.
JH: How long was it going on, and how was the decision made that that would be the course of action to take?
MMT: It began on September 18 and went until the 27, and before that we sat in for nine days asasit-in protest, and before the sit-in we tookalittle more than3months for the 900 mile march. We started from Fort Wayne, Indiana.
JH: Once you arrived at the United Nations building, what happened there? Did anyone recognize you? Did anyone ask you questions? What was your experience there?
MMT: We distributed pamphlets and of course there were international diplomats passing by, and many of the international diplomats passing by agreed with us, and some came back with their own media people and documented our actions. And some of the people passing by stopped and signed the petition.
JH: What did the petition say, and what is your ultimate goal?
MMT: The first goal is for the United Nations Security Council to resolve the Burma problem immediately. Secondly, we are asking that the United Nations General Assembly remove the illegal representatives, the regime, from the United Nations, and replace the seats with legitimate representatives of the people of Burma. Furthermore, we demand that the legitimate representatives be the winners of the 1990 general elections. Moreover, when we request the international community to replace the military representatives with the 1990 election winners, the United Nations must show by example. It should start at the United Nations.
JH: Do you feel you are closer to achieving those goals? Do you feel you are closer toaresolution with the United Nations, or that they will act on either of these tenets?
MMT: Yes, right now some of our representatives are already speaking to the international diplomats regarding the matter and they haveameeting with many of the officials at the United Nations. I think the process has already begun and should move forward. I would like to add that for us, the spokesperson is myself.
JH: So what do you think concerned Americans and other concerned citizens of the world should do if they feel like you and want these same two goals to be met – that the issue in Burma be resolved and that legitimate representatives are put in place?
MMT: I believe that the United States has been consistently supporting our cause and there is no doubt about it. In 2004, ten days into our actions at the United Nations, the United States representative to the United Nations, named Stuart Holliday, came to us and told us that they would help with our cause and discuss our Burma issues at the United Nations. The U.S. has been consistent in pushing our agenda at the United Nations forward and subsequently the U.N. council ended up discussing Burma’s issues. In 2006 and 2007, they continued to discuss Burma and finally it came to some decision making about Burma’s issues. For the Americans, I would like to suggest and request that you speak to the United States government to help implement the requests that we have been making throughout the years, which are to resolve Burma’s issues through United Nations mechanisms such as the Security Council. There is alsoagroup called Friends of Burma founded by Secretary-General Ban Ki-moon and certainly, of course, for the American people to work with the U.N. members to no longer legitimize the military junta’s representatives at the United Nations.
JH: Now that after the trial Aung San Suu Kyi was given another 18 months of house arrest, do you believe the military government will release her when the new sentence is over? Or what do you think they will do?
MMT: The reason they placed Aung San Suu Kyi under house arrest for 18 more months is only because, as we predicted, they don’t want her to compete in the 2010 elections. From what I understand, they will continue to detain her until the 2010 elections are over.
JH: What do you think the chances are ofaresolution? Do you think it’s possible to put enough pressure on them to allow Aung San Suu Kyi to participate in those elections?
MMT: As of now, we don’t have any 2010 elections because they haven’t reached international standards of the way they will be holding their 2010 elections. If they want their elections to be legitimate and recognized by the international community, they must respond to the requests that the National League for Democracy Party has made, which is first of all to release all political prisoners, including Aung San Suu Kyi, and they need to evaluate, and perhaps make corrections to the constitution they have drawn up in 2008. The international community must haveasystem to help monitor the election process to make it free and fair and make sure that all those political parties and leaders are able to participate. Until then, we don’t believe the 2010 elections are suitable to anyone.
JH: Okay, I want to get back to the hunger strike and the process of that. Is it something that you have done before and was it extremely arduous? How do you feel it helped affect your resolve and the mission while you were in New York at the United Nations?
MMT: Even before we actually began our actions, we have stressed that what we will do, especially with the walking of 900 miles, the sit-in, and the nine day hunger strike, we have done what we set out to do, and in the meantime we have sent out letters to the United Nations Secretary and to other nations, especially nations that are concerned about Burma issues. We have requested the previous demands that I have mentioned to you, and we will continue to the follow up with some of our representatives with these matters.
JH: So what’s the next thing you plan to do? There is obviously much more to be done, so now that the walk and the hunger strike are over, what are you going to do now to continue to get the word out and encourage the United Nations to take these actions?
MMT: As of now, we are planning to continue with further actions, such as collecting petitions, and doing similar actions in other parts of the world with the support of colleagues. Of course, our spokesperson will continue to follow up as he has been working on these issues.
JH: Is there anything else you would like to add to tell people who will be reading this interview?
MMT: One thing I would like to add is that currently, although the Burmese regime has extended Aung San Suu Kyi’s house arrest, they arrested her before the 18 month extension. The last time they began their arrest was at the end of May 2003, when they tried to assassinate her inavery small village and after they failed to assassinate her, they put her in prison then continued with the house arrest. When looking at all these facts, any international government can determine it’s obvious that the military junta has done many, many illegal activities. It is obvious that this regime has done these brutal acts against our people. The world must do more to take action against the regime. The fact that our leader has not been released and they continue to detain her is an illegal act that the military junta has done, and the world should not stand and watch the military regime to continue with its brutal act.
Photo by CAUSECAST, flickr.
Posted by Causecast
Posted by Long Marech for freedom at 7:54 PM 29 comments:
Burmese Hunger Strike at United Nations 2009 General Assembly
Posted by Jeffrey Hellman at 7:15 AM 1 comment:
Labels: Hunger Strike, Video
Posted by Jeffrey Hellman at 1:14 PM No comments:
Causecast: Interview with Burmese Refugee Maung Maung Tate
Posted by Jeffrey Hellman at 11:44 PM No comments:
အစာအငတ်ခံဆန္ဒပြခြင်း ၉ ရက်မြောက်နေ့နှင့် ပိတ်ပွဲအခမ်းအနား 9th day of Hunger Strike at the front of United Nation Building and Closing Events
အစာအငတ်ခံဆန္ဒပြခြင်း ၉ ရက်မြောက်နေ့ နှင့် မြန်မာပြည်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေး ခရီးရှည်ချီတက်ခြင်းနှင့် အစာအငတ်ခံ ဆန္ဒပြခြင်း ပိတ်ပွဲအခမ်းအနား
အစာအငတ်ခံဆန္ဒပြပွဲ နောက်ဆုံးနေ့ကို ရဲဘော်များ အားကျိုးမန်တက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြစဉ်
Signature Campaingn အတွက် လာရောက်လက်မှတ်ထိုးပေးနေသော အမေရိကန်နိုင်ငံများ
နယူးယောက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားများကလည်း လာရောက်အားပေးနေကြစဉ်
ထိုနေ့မှာပင် KHALISTAN နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံသားများကလည်း သူတို့လွတ်လပ်ရေးအတွက် လာရောက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြစဉ်
Washington DC ရှိ VOA သတင်းဌာနမှ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းအဖွဲ့ကလည်း သတင်းမှတ်တမ်းလာရောက်ယူနေစဉ်
ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားအား မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် သီရိလင်္ကာဘုန်းတော်ကြီးတပါးက
နယူးယောက်မြို့ ရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတချို့ မှ ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကို ချီတက်ခါ လာရောက်အားပေးကြစဉ်
“မြန်မာပြည်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး ခရီးရှည်ချီတက်ခြင်းနှင့် အစာအငတ်ခံဆန္ဒပြခြင်း” ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ အင်ဒီယားနားပြည်နယ်၊ ဖို့ဝိန်းမြို့ မှ နယူးယောက်ပြည်နယ်ရှိ ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်သို့ မိုင်ပေါင်း ၉၀၀ ခရီးရှည်ချီတက်ကာ ထိုင်သပိတ်နှင့် အစာအငတ်ခံဆန္ဒပြပွဲ (၉ရက်) ကို အောင်မြင်စွာပြုလုပ်ပြီးခဲ့သည်။
ဤပြည်ပနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကို အဖက်ဖက်မှ လူအား၊ ငွေအားနှင့် တိုင်းပြည်အပေါ်စေတနာထား၍ ရွပ်ရွပ်ချွန်ချွန် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သော ရဲဘော်များနှင့် ချီတက်ရာလမ်းတလျှောက်ရှိ ၀ိုင်းဝန်းကူညီခဲ့ကြသော မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများအားလုံးအား ဤနေရာမှနေ၍ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး မုချ အောင်မြင်ရမည်
Posted by Long Marech for freedom at 8:26 AM 1 comment:
ဆန္ဒပြခြင်း ၈ ရက်မြောက်နေ့ 8th day of Hunger Strike at the front of United Nation Building
ရဲဘော်မင်းရွှေဦးအား သတင်းထောက်များမှ မေးမြန်းနေစဉ်
ရဲဘော် ကဘောယူအား သတင်းထောက်များမှ မေးမြန်းနေစဉ်
ရဲဘော်မောင်မောင်တိတ်နှင့် ရဲဘော်စောငိုတို့အား သတင်းထောင်များက မေးမြန်းနေစဉ်
အစာအငတ်ခံဆန္ဒပြခြင်း ၈ ရက်မြောက်နေ့ အမှတ်တရ မှတ်တမ်းဓါတ်ပံများ
Posted by Long Marech for freedom at 8:07 PM 17 comments:
အစာအငတ်ခံဆန္ဒပြခြင်း ၇ ရက်မြောက်နေ့ 7th day of Hunger Strike at the front of United Nation Building
၇ ရက် အစာအငတ်ခံ ဆန္ဒပြပြီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသော ရဲဘော်များ
အစာအငတ်ခံ ဆန္ဒပြပြီး ၇ ရက်မြောက်နေ့တွင် နိုင်ငံတကာမှ UN အစည်းအဝေးအား လာရောက် ဆန္ဒပြနေသော သူများ
အစာအငတ်ခံ ဆန္ဒပြနေသော ရဲဘော်များအား လာရောက်အားဖြည့်နေသော ရဲဘော်များနှင့်အတူ
Posted by Long Marech for freedom at 7:39 PM No comments:
အစာအငတ်ခံဆန္ဒပြခြင်း ၆ ရက်မြောက်နေ့ 6th day of Hunger Strike at the front of United Nation Building
အစာအငတ်ခံဆန္ဒပြခြင်း ၆ ရက်နေ့၌ ယူတီကာမြို့ မှ ရဲဘော်များနှင့် အတူ
အီရန် အတိုက်အခံများကလည်း Signature Campaign အား လက်မှတ်ထိုးပေးနေကြစဉ်
မစ္စတာ အာလက်ဇန္ဒားမှ မြန်မာ့အရေးအကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားနေစဉ်
အစာအငတ်ခံ ဆန္ဒပြခြင်း ၆ ရက်မြောက်နေ့ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံများ
Posted by Long Marech for freedom at 2:34 PM No comments:
အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခြင်း (၅) ရက်မြောက်နေ့
စက်တင်ဘာလ (၂၂) ရက်၊ ၂ဝဝ၉
ပန်းခြံသို့ နံနက် (၈) နာရီ (၄၅) မိနစ်တွင်ရောက်ရှိသည်။ လမ်းများပိတ်ထား၏။ ဒီပလိုမက်ကားများမှလွဲ၍ မဝင်ရပါ။ လုံခြုံရေးထူထပ်လှ၏။ ယနေ့အဖို့ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ ရထားဖြင့်လာကြသည်။ အနီးရှိဆိုင်တွင် ပစ္စည်းတချို့ အပ်ထားခဲ့၍ တော်ပါသေးသည်။ မဟုတ်ပါက ထမ်း၍ယူလာရမည်။ မထမ်းနိုင်တော့ပါ။ အားမရှိတော့။ အခမ်းအနားကို အကျဉ်းရုန်းပြင်ဆင်လိုက်သည်။
ဆန္ဒပြရာပန်းခြံသို့ ရောက်ကတည်းက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့တဖွဲ့ ဆန္ဒပြနေသည်။ တိဘက်အဖွဲ့ကလည်း အခမ်းအနားပြင်ဆင်နေကြ၏။ တိဘက်ဘုန်းတော်ကြီးကိုလည်း တွေ့ရသည်။
(၉) နာရီ (၁၅) မိနစ်တွင်WCBS Radio နှင့် အင်တာဗျူးရသည်။ လောလောဆယ် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် နေရာ ကျယ်ကျယ်ရထားသည်။ ထောက်လှမ်းရေးရောက်လာ၏။ နောက်ထပ်များပြားသောအဖွဲ့များ ရောက်လာ စရာရှိသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နေရာ ကျဉ်းသွားလိမ့်မည်ဆို၏။ ပြောရင်းဆိုရင်း ရဲများက အတန်းများလာချလိုက်သဖြင့် နေရာကျဉ်းသွားလေ၏။ အလံတိုင်များသည် သစ်သားချောင်းများဖြစ်နေသဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်ရသည်။
တိဘက်အဖွဲ့က အကြီးအကျယ်ကြွေးကြော်ဆန္ဒပြနေ၏။ ကုလသမဂ္ဂကို အိပ်ယာမှနှိုးနေပြီး၊ တရုပ်ကိုရှုတ်ချ နေသည်။ သီရိလင်္ကာအဖွဲ့ရောက်လာသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးများပါဝင်၏။ တခုတည်းသော သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံဖြစ်ရေးအတွက် လာရောက်ဆန္ဒပြနေခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိအစိုးရကို ထောက်ခံသော အဖွဲ့ဖြစ်ဟန် တူပါ သည်။
တရုပ်အဖွဲ့တဖွဲ့ကလည်း တရားထိုင်နေ၏။ Falun Gong အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတိုင်းပြည်အတွက် လာရောက် ဆန္ဒပြနေသူ အဖွဲ့များအားလုံးသည် အာရှတိုက်သားများချည်းဖြစ်၏။ ဂျူးအဖွဲ့တဖွဲ့လည်း ဆန္ဒပြနေသည်။
ပန်းစည်းရှင်အဖွားကြီးရောက်လာသည်။ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးများ ဘယ်အချိန် ရောက်လာမည့် အကြောင်း မေးသည်။ တရုပ်မောင်နှံ ရောက်လာ၏။ ကိုးကန့်တွင် ဖြစ်ပျက်နေသောကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းဒေသရှိ တရုပ်လူမျိုးများကိုကူညီချင်ကြသည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာပြည်သို့ သူတို့မသွားရောက်နိုင်။ ကွန်မြူနစ်တရုပ် ကလည်း အစစ်အဆေးထူထပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဆို၏။
မမိုင်ရာလည်းရောက်လာသည်။ အာဏာရှင်များကို ငရဲပို့မည့် မိတ်ဆွေတရုပ်လည်း သူ့ဆိုင်းဘုတ်ကလေးကို ကိုင်၍ရောက်လာသည်။ ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစိန်ဝင်း၊ ဇနီးဒေါ်စီစီနှင့် သားလေးတို့အဖွဲ့ရောက်လာသည်။ ကိုးကန့်ပြည်သူများကို ကူညီချင်သည်ဆိုသော တရုပ်မသည် မမိုင်ရာနှင့် ဗျူဟာခင်းကျင်းပြီးနောက်၊ ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစိန်ဝင်းနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသမှုပြုနေသည်။
ဒီဗွီဘီသတင်းထောက် ကိုအောင်အောင်ရောက်လာ၏။ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု လှုပ်ရှားရန်ရှိသဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ရန် ရောက်လာခြင်းဖြစ်ဟန်တူသည်။ မစန္ဒီလည်းရောက်လာ၏။
VOA မှ သတင်းထောက်လာရောက်ဗျူးသည်။ မေးမြန်းချက်မှာ မည်သည့်အတွက် ယနေ့လာရောက် အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေကြောင်း။ ရဲဘော်မောင်မောင်တိတ်၏ ဖြေဆိုချက်မှာ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ ကျင်းပနေချိန်တွင် မြန်မာ့အရေးကို အာရုံစိုက်မိစေရန်၊ ၎င်းအတွက် အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် လုံခြုံရေး ကောင်စီသို့ စာပို့ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ၁၉၉ဝ ခုနှစ်၊ မေလရွေးကောက်ပွဲအကောင်အထည်ဖေါ်စေလိုပြီး၊ စစ်အာဏာရှင်တို့ကြံစည်သည့် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲကို ကန့်ကွက်ကြောင်း၊ တရားမဝင်အစိုးရကို မထောက်ခံပါ စသည်တို့ဖြစ်၏။
ဆက်လက်၍ Associated Press ကသတင်းထောက်လည်း လာရောက်မေးမြန်း၏။ အဓိကမေးချက်မှာ အထက်ပါအတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးနှင့် မြန်မာ့အရေး ကုလသမဂ္ဂ မှ အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် လမ်းလျှောက်ချီတက်ခဲ့ကြောင်း၊ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြ နေကြောင်း ပြောဆိုလိုက်၏။
မြန်မာ့မိတ်ဆွေတချို့ရောက်လာသည်။ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး၊ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု ပြည်ပတာဝန်ခံ ဆရာတော်ဦးပညာဇောတ ကြွလာသည်။ နယူးယောက်မြို့နေ ကိုအောင်မိုးဝင်းလည်း ပါလာသည်။ အစီအစဉ်မှာ တိဘက်၊ အီရန်နှင့် မြန်မာအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းပြီး ဆန္ဒပြရန်ရှိသည်။ ယနေ့တွင်လည်း ထိုပူးပေါင်းမှုတွင် ဆရာတော်က မိန့်ခွန်းပြောကြား၏။ တိဘက်ပြည်သူတို့အတွက် လည်းကောင်း၊ မြန်မာ့အရေးအတွက်လည်းကောင်း ဟောကြားသည်။ အာဏာရှင်တို့ဖိနှိပ်မှုကြောင့် တိဘက်နှင့် မြန်မာများသည် ဤအချိန်ဤနေရာ၌ လာရောက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြရသော တူညီသောဖြစ်စဉ်ကို ပြောပြသည်။
အဖွဲ့အစည်းများသည် စုံလင်လှ၏။ ဝါစိမ်းနီပြာ ခရမ်း မဲနယ် လိမ္မော် စသည်ဖြင့် အလံပေါင်းစုံနေသည်။ တိဘက်အဖွဲ့က အလွန်တက်ကြွ၏။ လူလည်းများ၏။ အသံမစဲစတမ်းကြွေးကြော် အော်ဟစ်နေကြသည်။ Falun Gong အဖွဲ့ကား ငြိမ်သက်စွာတရားထိုင်နေ၏။ လမ်းတဖက်တွင် သီရိလင်္ကာ အဖွဲ့တဖွဲ့ ထပ်ရှိသည်။ သူပုန်ကို ထောက်ခံသော ကျားတံဆိပ်အလံ အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ အော်ဟစ်နေ၏။
ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ကား ခါတိုင်းကဲ့သို့ပင်။ ရဲဘော်မိုးသီးဇွန်ရောက်လာ၏။ ပြန်ခါနီးအချိန်တွင် ကိုရဲထွတ် ရောက်လာ၏။ အလှူငွေပေးသွားပါသည်။ မနက်ဖြန်တွင် တိဘက်၊ အီရန်၊ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး၊ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုဆရာတော် ဦးပညာဇောတ အမှူးရှိသော မြန်မာအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းဆန္ဒပြရန် အစီအစဉ်ရှိပါသေးသည်။
Posted by Long Marech for freedom at 6:40 PM No comments:
အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခြင်း (၄) ရက်မြောက်နေ့
စက်တင်ဘာလ (၂၁) ရက်၊ ၂ဝဝ၉
နံနက် (၉) နာရီတွင် ပန်းခြံသို့ရောက်ရှိသည်။ ပန်းခြံတွင် လုံခြုံရေးထူထပ်လှ၏။ ရဲကားများပြည့်နေသည်။ မနေ့ ကတည်းကပင် ရဲအဖွဲ့က အနီးအနား၌ စောင့်နေသည်။
ကျွနု်ပ်တို့၏ အခမ်းအနားအပြင်အဆင်သည် ယခုအခါဂိတ်ဆုံးသို့ ရောက်သွား၏။ တာဝန်ရှိသူများက တာဝန်ရှိစွာလာပြောသဖြင့် ဆိုင်းဘုတ်၊ ပိုစတာ၊ အလံ စသည်တို့သည် လုံးဝကြိုးချည်၍မရတော့ပါ။ စာတမ်းကို တနေကုန် ကိုင်ထားရမည်ဖြစ်၏။
(၁၁)နာရီထိုးခါနီးအချိန်တွင် ပန်းစည်းရှင်အဖွားကြီးရောက်လာသည်။ပန်းအိုးများကိုရေအသစ်လဲ၏။ လက်ကမ်း စာစောင်ကူးထားသည်များကို လာပေးသည်။ ရဲဘော်စောငိုအတွက် ပြင်သစ်ပန်းချီဆရာများ၏ ပန်းချီကားပို့စကဒ်များကို လက်ဆောင်ပေးပါသည်။
(၃) နာရီထိုးခါနီးတွင် မနေ့က ဖုန်းဆက်ထားသည်ဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်တဦးရောက်လာသည်။ သတင်းယူသော အဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ ရဲဘော်မင်းဆွေဦးနှင့် မေးမြန်းသမှုပြုနေ၏။
ရဲအဖွဲ့ကလည်း ပန်းခြံတွင်လာစုနေရာ လမ်းသွားလာသူများပင် နေရာမရှိဖြစ်နေသည်။ ယနေ့အဖို့ ဤနေရာ တွင် အကျဉ်းချုံးပါရစေ။
Posted by Long Marech for freedom at 5:25 PM No comments:
အစာအငတ်ခံ ဆန္ဒပြခြင်း တတိယနေ့ 3rd of Hunger Strike at the front of UN Building
စက်တင်ဘာလ ၂ဝ၊ ၂ဝဝ၉
နံနက် (၉) နာရီထိုးရန် (၁ဝ) မိနစ်အလိုတွင် အခမ်းအနားပြင်ဆင်ပြီးစီးသည်။ သာယာသောနေ့ဖြစ်ပါသည်။ ကိုမြတ်ထွန်းရောက်လာပါသည်။ ပန်းစည်းရှင် အဖွားကြီးလည်း ရောက်လာပါသည်။ ပန်းအသစ်များထပ်ဖြည့်၏။ စကားစမြည်ပြောကြသည်။
ထိုအမျိုးသမီးကြီးသည် ပြင်သစ်မဂ္ဂဇင်း တွင်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်၏။ အနုပညာနှင့် ပတ်သက်သော အလုပ် ဖြစ်ပါသည်။ အရှေ့တိုင်းယဉ်ကျေးမှုကို လေ့လာနေသူဖြစ်သည်။ ဓါတ်ပုံပညာနှင့် ရှေးဟောင်းအနုပညာများ ပါဝင်သည်။ အတော်ကြာကြာ စကားပြောပြီးနောက် နှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားသည်။
(၁၁) နာရီ (၄၅) မိနစ်တွင် ပန်းခြံတာဝန်ရှိသူရောက်လာသည်။ သစ်ပင်နှင့် မီးတိုင်တို့တွင် ချည်နှောင်ထား သော စာတမ်းကို ဖြုတ်ခိုင်းပါသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြင်အဆင်သည် တတိယမ္ပိ ဒီဇိုင်းဖြစ်သွားပါ၏။ ပထမတုန်းကလည်း တကြိမ်ဖြုတ်ရပြီးပြီဖြစ်၏။ သံတန်းနှင့် သစ်သားအကန့်တွင် စာတမ်းကိုကြိုးနှင့် တန်းလိုက် ၏။ အမှန်မှာတော့ ပန်းခြံစည်းကမ်းနှင့် ည‡ိစွန်းလျက်ရှိတုန်းပင်။
ပန်းခြံရှိသစ်ပင်နှင့် ဓါတ်တိုင်ကို အမှီပြုပြီး မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီမရနိုင် ဆိုသည်ကို မီးမောင်းထိုးပြခြင်း ဖြစ်သည်။ ပြချင်လျှင် ကိုယ့်စတင်းကို ရှာဖွေလာရမည်ဖြစ်၏။ စတင်းနှင့် ခုံနှင့် တန်းနှင့်ဆိုလျှင် ငွေတထောင် လောက်လိုပါသည်။ ငွေမရှိလျှင် စတင်းမရှိ။ စတင်းမရှိလျှင် ပြ၍မရ။ ဤကား လောကကို အစိုးရသော တရား လည်းဖြစ်၏။
လက်ကမ်းစာစောင်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ ဖုန်းနံပါတ်ကိုရသဖြင့် တရုပ်အဖွဲ့တဖွဲ့ ဖုန်းဆက်မေးမြန်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြအဖွဲ့သို့ နောက်ထပ်အင်အားမည်မျှရောက်လာမည့်အကြောင်း၊ တခြားသောအဖွဲ့များလည်း ရောက်လာရန်ရှိမရှိ စသည်တို့ကို မေးမြန်းသည်။
ထို့နောက် နာရီဝက်ခန့်ကြာလျှင် ထိုအဖွဲ့ရောက်လာသည်။ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြသည့်ကိစ္စ၊ လမ်းလျှောက် ချီတက်သည့်ကိစ္စများကို မေးမြန်းသည်။ အမေးအမြန်းထူထပ်ပြီး လက်မှတ်ထိုးမသွားသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ လေ့လာသူတိုးရစ်အနေဖြင့်သာ လာသူဆို၏။ ပါလာသောအဖွဲ့ကလည်း လေ့လာသူပုံစံတော့ပေါက်ပါသည်။ မည်သည့်သတင်းဌာနမှ မဟုတ်ပါ။
နေ့လည်တွင် တိုကျိုဗြူရို ဂျပ်စတိစီစတမ်အဖွဲ့မှ လာရောက်မေးမြန်းသည်။ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းရိုက်သမား နှစ်ယောက် နှင့် အရာရှိဟုယူဆရသူတယောက်ဖြစ်ပါသည်။ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေသည့်အကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂသို့ တင်ပြချင်သည့်အကြောင်းများ နှင့် ဤလှုပ်ရှားမှုကို မည်ကဲ့သို့စတင်ခဲ့ကြောင်း မေးမြန်းပါသည်။
အခမ်းအနားပြင်ဆင်ထားသည်များကို ထောင့်စုံအောင်ရိုက်ကူးသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံပန်းချီကား၊ ဆိုင်းဘုတ်နှင့် စာတမ်းများကို အသေအချာရိုက်ကူးသည်။
ညနေ (၆) နာရီထိုး၍ ပစ္စည်းများသိမ်းပြီး ကားပေါ်တင်နေစဉ် ကိုးရီးယားပုဂ္ဂိုလ်တဦးရောက်လာပြီး လက်ကမ်း စာစောင်တောင်းပါသည်။ ကိုးရီးယားမီရှင်အဖွဲ့မှဟု မိတ်ဆက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လှုပ်ရှားမှုကို အားပေး ထောက်ခံကြောင်းပြောဆိုသည်။ မြန်မာပြည်အကြောင်းတင်ပြရန် အချိန်ကောင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောသည်။ စောစောကလာသော တရုပ်နှင့်တော့ ကွာခြားလှသည်။ တိုင်းပြည်ပြန်ပါက အနည်းဆုံး ထမင်းအိုးကွဲမည်ကို သတိပြုရမည်။
ကောင်းလေစွ။ အသက်ကိုဉာဏ်စောင့်၏။ သိန်းစိန်ကို မည်သူစောင့်မည်မသိ။ ကြက်ဥပုပ်နှင့် စောင့်ရန် အစီအစဉ်ရှိသလိုလို ကြားရသည်။ မြန်မာပြည်တွင် စစ်ဗိုလ်ဝန်ကြီးချုပ်များ၏ လူ့သက်တမ်းသည် အရူးထောင် နှင့် သင်္ချိုင်းတွင် မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထား၏။
Posted by Long Marech for freedom at 8:39 AM No comments:
Burmese Hunger Strike at United Nations 2009 Gener...
Causecast: Interview with Burmese Refugee Maung Ma...
အစာအငတ်ခံဆန္ဒပြခြင်း ၉ ရက်မြောက်နေ့နှင့် ပိတ်ပွဲအခမ...
ဆန္ဒပြခြင်း ၈ ရက်မြောက်နေ့ 8th day of Hunger Strike...
အစာအငတ်ခံဆန္ဒပြခြင်း ၇ ရက်မြောက်နေ့ 7th day of Hung...
အစာအငတ်ခံဆန္ဒပြခြင်း ၆ ရက်မြောက်နေ့ 6th day of Hung...
အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခြင်း (၅) ရက်မြောက်နေ့ စက်တင်ဘာလ (၂၂)...
အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခြင်း (၄) ရက်မြောက်နေ့ စက်တင်ဘာလ (၂၁...
အစာအငတ်ခံ ဆန္ဒပြခြင်း တတိယနေ့ 3rd of Hunger Strike ...